Rowan | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokomisa amakhowe ama-oyster: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo ngezithombe
Ama-mushroom e-oyster ayinhlobo ewusizo futhi engabizi kakhulu yama-mushroom, angasetshenziswa emashalofini. Kulabo abafuna ukuzimela ngokuzimela amakhowe ama-oyster ngendlela efomile yokugcina isikhathi eside, sizokutshela ukuthi ungakwenza kanjani ngendlela efanele, ukuze ukunambitheka kwabo kungakudumazi esikhathini esizayo. Kungenzeka yini ukomile amakhowe amakhoster? Kuneziqondiso ezanele ezinyathelo ngezinyathelo kwi-intanethi ukuthi ungomisa kanjani amakhowe, amakhowe amhlophe kanye nezinye izinhlobo zamakhowe, kodwa kunolwazi oluncane mayelana nama-oyster amakhowe, ngoba lo mkhiqizo awuthandwa kakhulu ekomiswe.
Yini i-jam ewusizo ezithelo ze-red rowan
U-Rowan ubonakala hhayi kuphela ezingoma, kodwa nakwezokwelapha, i-cosmetology ngisho nokupheka. Kusukela kumajikijolo awo abomvu, kutholakala ujamu omuhle kakhulu, ozowunqoba izinhliziyo zezinkuni ngephunga layo elingenakuqhathaniswa nokunambitheka komlingo, ukudukisa ngombala walo okhanyayo. Ukudla okunjalo kungumkhiqizo wokudla owusizo kakhulu ocebile amavithamini namaminerali, ngenxa yokuthi ukuphilisa kwangempela kulabo abawudlayo ekudleni.
Indlela yokupheka iwayini le-rowan ekhaya
I-red rowan ikhula kulo lonke elaseYurophu, e-Asia naseNyakatho Melika. Izibhamu ezibomvu ze-Orange zithokozisa ngemibono yazo kusukela ngoSepthemba kuya ku-frost. URowan uhlobisa amapaki kanye nezikwele zedolobha, atholakala emahlathini nasezikhungweni ezizimele. Ngaphandle kobuhle bangaphandle, enye yezindlela zokuyisebenzisa - iwayini le-rowan elenziwe ekhaya.